कुन बार कुन भगवानको पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ ? जान्नुहोस ! – Khabar PatrikaNp
कुन बार कुन भगवानको पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुन्छ ? जान्नुहोस !
July 22, 2020 513
Prevबाढीको डर’लाग्दो बितण्डा, कालिगण्डकी:देखि बाग्मतीसम्म यसरि उर्लिए (हेर्नुहोस भिडियो)
Nextमिर्गौला स्वस्थ राख्न यो तरिका अपनाउनुहोस !
दशैंमा गाउपालिका भित्र प्रवेश गर्नेहरुलाई अनिवार्य रुपमा पिसीआर रिर्पोट नेगेटिभ आएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने निर्देशन ( सुचना सहित)
तिम्रो लोग्ने: अर्काकी स्वास्नी फकाउन मिल्ने हामी महिला अर्काको लोग्ने फकाउन किन मिल्दैन…
दिउँसो १२ बजे देखि ३ बजेको बीचमा जन्मिएकाहरुको भाग्य यस्तो हुन्छ …! जान्नुहोस